Ciidamada amniga oo sugay amniga xabsiga dhexe ee Xamar
Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa soo af jaray hawlgal ay ka wadeen xabsiga dhexe ee Muqdishu iyaga oo toogtay afar maxaabiis ahaa oo adeegsadnayey bastoolado oyo bambo oo weeraray ciidamada amniga. Laba ka tirsan mxaabiista oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen ayaa la qabtay iyaga oo dhaawac ah, sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga ah.
Sida ay sheegeen laamaha amniga, ciidamada ayaa haatan gcanta ku haya qaybta ay ku xiran yihiin dadka ku xukuman xabsiyada dhaadheer xabsiga oo ahayd goobta dagaalku ka dhacay.
Sarkaal amniga ka tirsan ayaa VOA u sheegay in maxaabiistu ay heleen lix bamboo gacmeed iyo saddex bastooladood. Waxaa saraakiishu aaminsan yihiin in hubkan loogu dhex qariyey cunto iyo agab kale oo loo geeyo maalmaha booqashada.
Mid ka mid ah maxaabiista ayaa la la’yahay oo la aamian yahay inuu baxsaday, ila markaana laba qof uu ku dilay meel ka mid ah magaalada
Maxaabiis dagaalantay ayaa la aamisan yahay in loo hayay falal argagixiso. Maxaabiistan ayaa la aamisan yahaya inay ugu xirnaayeen xabsiga dhexe inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab.
Ilo kala duwan ayaa u sheegay VOA in rasaastu ka dhacday xabsiga dhexdiisa, lana toogtay xubno ka tirsan ilaalada xabsiga.
Sarkaal ka tirsan laamaha amniga oo magaciisa codsaday inaan la sheegin waxa uu VOA u sheegay in ilaa afar ka tirsan maxaabiista oo u xukuman Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday ilaalada xabsiga.
Xubno ka tirsan ciidamada ilalada xabsiga ayaa la sheegay inay iyagana waxyeello ka soo gaartay weerarkaas.